बादल पन्छाउँदै खिमलालको जीत | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: ६ जेष्ठ, २०७८
बादल पन्छाउँदै खिमलालको जीत
हेटौँडा । राष्ट्रियसभाको बिहीबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदबार खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमालेका उमेदवार रामबहादुर थापा बादल र नेमकिपाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर तामाङलाई पछि पारे।
स्थानीय तहको नतिजामा पनि स्वतन्त्र हैसियतमा डा. खिमलाल देवकोटाले जिते। प्रदेशसभाको मत पनि देवकोटाको पक्षमा आएको छ। देवकोटा ५०८८ मतभारसहित निर्वाचनमा विजयी भएका हुन्।
स्थानीय तहमा जम्मा २३८ मत मध्ये खसेको कुल जसमा २३३ जना मतदानमा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये देवकोटाले कलमको तर्फ १२८ अर्थात २३०४ मतभार, सूर्य चुनाव चिन्ह लिएका बादललाई १०३ अर्थात १८५४ मतभार र नेमकिपाको मादलतर्फ २ अर्थात ३६ मतभार आएको हो ।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरुको मतदातातर्फ बादललाई ४५ मत अर्थात २१६० मतभार, खिमलाल ५८ मत अर्थात २७८४ र तामाङको २ अर्थात ८४ मतभार आएको हो ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि चारजना प्रदेश सांसदले मतदान गरेनन्। बागमतीमा रहेका १०९ सांसदमा १०५ जनाले भोट हालेका थिए ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभाका पशुपति चौलागाईंको निधन भएपछि १०९ कायम भएको छ । स्थानीय तहतर्फ पाँचजनाले भोट दिएनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ११९ पालिकातर्फ २३८ मतदाता थिए ।
एमालेका उम्मेदवार बादललाई एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहयोग गरेपछि पराजित हुन बाध्य भए। नेपालले माओवादी र कांग्रेसको साथ लिएर डा. खिमलाल देवकोटालाई कलम चुनाव चिन्हबाट लडाएका थिए । एमालेमा वार्ताअघि बढिरहँदा पनि नेपालले बादललाई साथ दिन अस्वीकार गरेका थिए । अन्ततः उनीनिकट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरुको भोट नै बादललाई पराजित गर्न निर्णायक भएको छ।
इतिहास रचेँ : खिमलाल
निर्वतमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पराजित गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका डा. खिमलाल देवकोटाले बिश्वको इतिहासमै नभएको काम नेपालमा भएको बताए ।
मैले सोचेको र पढेको छैन एक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मुलुकका ठूला पार्टीको साथ र सहयोगबाट बिजयी भएको उनले भने । मुलुकको परिवर्तनको पक्षमा काम गर्नका लागि ठूला पार्टीहरुले आफ्नो उमेदवार नभई, स्वतन्त्रलाई सहयोग गर्दै विजयी गराएको पहिलोचोटि भएको बताए ।
उनले बागमती प्रदेशमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेको र संघीयता र स्थानीय तह अधिकारको पक्षमा निरन्तर बहस गरेकोले आफुले सहज ढंगले मत पाएको बताए ।
आफूलाई बागमती प्रदेशको मात्रै नभई देशभरीका संघीयता प्रेमीहरुले माया गरेको भन्दै भने ‘मैले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारको विषयमा गरेको कामले मत पाउने विश्वास भएरै उम्मेद्वारी दिएको थिएँ, मैले त्यहि अनुसार मत पाएको हुँ ।’
उनले राष्ट्रियसभाको विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा विज्ञहरुको हाउस भएको भन्दै संघीय सरकारको नभई तल्लो सरकारहरुको पक्षमा बोल्ने अभ्यास भएता पनि नेपालमा नभएको र आफूले त्यसो गर्ने बताए ।
उनले आफ्ना मतदाताहरु प्रति जहिले पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरुको मतलाई सम्मान गर्ने गरी काम गर्ने दाबी गरे । देवकोटाले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल र नेमकिपाका उमेदवार कृष्णबहादुर तामाङलाई हराउँदै विजयी भएका हुन् ।
हेटौँडामा बादललाई झट्का
बहालवाला गृहमन्त्री भएर राष्ट्रिय सभाको चुनाव लड्न बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आएका बादललाई दोहोरो झट्का लागेको छ । उनले राष्ट्रिय सभाको मतपरिणाम आउनु भन्दै केही समयअघि मन्त्री पद गुमाउन पुगे । विना सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको दोहो¥याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरित भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो ।
उक्त रिटको सुनुवाई हुँदै नियुक्ति र शपथग्रहण बदर भएको हो । उनले मन्त्री पद गुमाएको केही बेरमै हेटौँडामा राष्ट्रियसभाको मतपरिणाम आए जहाँ डा. खिमलाल देवकोटाले उनलाई हराए । हेटौँडामा बादललाई झट्का लागेको छ । मन्त्री पद गुमेपछि मतगणना स्थल छोडेर हेटौँडाका एभोकाडो होटल गएका बादल मतपरिणाम आउनेबित्तिकै काठमाडौँ हानिए ।